Nri Alkaline - Otu esi eso ya ka ị ghara ibu ibu IT ỌR | | Nutri Nri
Sergio Gallego | | Alimentos, Nkwere maka enyemaka
Taa enwere ọtụtụ nri iji tụfuo, ụfọdụ adịghị mma ma na-emerụ ahụ ike na ndị ọzọ n'ụzọ megidere -enyere gị aka idalata na irè na ike ụzọ. Oge a ka m ga-agwa gị gbasara nri alkaline, nke na-agbachitere na ọtụtụ n'ime ọrịa ndị na-eme taa bụ erighị nri na-adịghị mma na nnukwu acidity nke ahu di na aru. N'ụzọ dị otú a, atụmatụ ọnwụ ọnwụ a na-adụ ọdụ na-eri usoro nri nwere oke alkalinity, nke na-enyere aka belata ogo nke acidity nke nri ndị ọzọ na-emepụta.
1 Igwe pH dị n'ahụ
2 Nri alkaline
3 Nri acid
4 Uru nke nri alkaline
5 Uzo ojoo ihe oriri alkaline
6 Ndụmọdụ na ntuziaka mgbe ịmalitere nri alkaline
7 Ihe ndị ọzọ na-enyere aka idozi pH n'ọbara
Igwe pH dị n'ahụ
A na-eji ọkwa pH iji tụọ etu acid si ahụ. Na nkịtị pH n'ọbara ọ dị ihe dịka 7,5. Ezigbo nri dị mkpa iji nwee ọkwa pH dị mma ma si otú a zere ọdịdị nke ọrịa dị iche iche. Nri alkaline na-achọ ka pH n'ime ọbara zuru oke ma na-ekwe nkwa maka ụkọ ọnwụ a, ezi ọkpụkpụ ọkpụkpụ na igbochi ọrịa dị iche iche nke nnukwu acidity kpatara.
Ndị a maara dị ka nri alkaline bụ bara ọgaranya na mineral dị ka sodium, calcium, potassium na magnesium. Nri alkaline na-akwado nri kwesịrị ekwesị dabere na usoro nri a. N'ụzọ dị otú a, ị kwesịrị itinye nri gị kwa ụbọchị mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị ka broccoli, asparagus, zucchini, tomato, ma ọ bụ ube oyibo. Ha enweghịkwa ike ị na-efu akụ dika ukpa ma obu nkpuru osisi almọnd na mkpo dị ka chickpeas ma ọ bụ lentil.
Iri nri nke acidic dị mkpa iji nweta ọkwa pH dị mma n'ọbara. Ha bara ọgaranya na mineral dị ka site na mmanụ, ígwè na ayodiin, enwere ike ịchọta ya Uhie anụna ihe oriri, n'ime ngwaahịa mmiri ara ehi ma ọ bụ na mmanụ a nụchara anụcha.
Uru nke nri alkaline
Ọ bụ nri na na-agba ume iri nri dị mma dabere na nri ndị na-edozi ahụ dị ka mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri ma ọ bụ mkpụrụ. Na mgbakwunye na nke a, ọ na-egbochi oriri nke abụba, mmanya ma ọ bụ shuga.
Soro ụdị atụmatụ ọnwụ ọnwụ a ga-enyere onye ahụ aka ịkwụsị pound ọzọ na ahụ ike na n'ụzọ zuru oke. Maka akụkụ ya, iri nri nke acidic na alkaline na-enye aka ka e wee felata n'ụzọ dị oke mkpa.
Uru ndị ọzọ nke nri alkaline bụ mgbochi nke ọrịa nwere ike ịbụ dị ka ogbu na nkwonkwo, na - eme ka ike dị n’ahụ mmadụ ma ọ bụ na - enyere aka belata nkụda mmụọ dị n’arụ mmadụ.
Uzo ojoo ihe oriri alkaline
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ nri, tupu ịmalite nri nri alkaline ọ dị mma ịgakwuru onye na-edozi ahụ iji chọpụta ma ọ bụ ọchịchị nke kwesịrị ịgbaso ma ọ bụ na ọ ka mma ịmalite ụdị nri ọzọ. Dọkịta ịkwesịrị ịme nyocha ụfọdụ iji lelee ọkwa pH gị n'ọbara marakwa ma ịchọrọ iri nri acidic na alkaline. Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa shuga, anaghị atụ aro ka ị soro ụdị nri a n'ihi na ọ nwere ike ịgbanwe ahụike gị nke ukwuu.
Ndụmọdụ na ntuziaka mgbe ịmalitere nri alkaline
Ndị na-agbachitere nri alkaline, na-akwalite na pH na-eme ka ncheta dịwanye ukwuu, nke ahụ ahụ nwere ume karịa nakwa na ụra ụra dị elu nke ukwuu. Agbanyeghị, ọ bụ ụdị nri ị na - enweghị ike ịmalite n'onwe gị ebe ọ bụ na ọ ga - adị mma ma ị buru ụzọ gakwuru onye na - ahụ maka nri ga - enyocha gị ma gwa gị ma ọ bara uru ịmalite nri a.
Ọzọ, m ga-enye gị ihe atụ nke ihe nwere ike ịbụ nri ụbọchị kwa ụbọchị nke nri alkaline ka ị dee ma ị nwere ike ịmepụta menu nke gị.
N'oge nri ụtụtụ ị nwere ike ịhọrọ inwe ihe ọ juiceụ juiceụ sitere na akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi.
Maka etiti ụtụtụ ị nwere ike iji iko mmiri mee ihe otu mkpụrụ osisi.
N'oge nri ehihie ị nwere ike ịme efere akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nwere ike ikpokọta a efere ya na ụfọdụ ọka ma ọ bụ ụfọdụ mkpo ebe ọ bụ na ọ adaba na ị na-edozi ndị sitere na akwukwo nri.
Maka nri ị nwere ike ịnwe infusion ma ọ bụ otu mkpụrụ osisi.
Banyere nri abalị, ọ kachasị mma ịhọrọ maka obere kalori na nri dị ka grill inine ma ọ bụ oatmeal na ụfọdụ mkpụrụ osisi.
Ihe ndị ọzọ na-enyere aka idozi pH n'ọbara
Ewezuga nri alkaline enwere usoro ihe ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka idozi pH n'ime ọbara ma zere nsogbu ahụike n'ọdịnihu.
Mee ntakịrị ihe mgbatị ahụ oge niile Ọ na - enyere metabolism aka na - arụ ọrụ mgbe niile ma n’ụzọ dị otú a ọ nwere ike iwepụ adịghị ọcha na nsị dị na ahụ na nke nwere ike ime ka pH bilie oke.
Ọ dị mkpa iji mee ka ahụ dị ọcha site n'oge ruo n'oge. Iji mee nke a, na mgbakwunye na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ ị nwere ike ime ụdị mmanya diuretic nke na enyere aka hichaa ime ahu ma wepu nsi.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ inwe nguzozi n’ahụ ọ dị mkpa ka ị nwetakwa edozi na ọkwa mmetụta uche. Ọ bụrụ na ijikwa ijikọta uche na ahụ, ị ​​gaghị enwe nsogbu acidity na ahụ nke nwere ike ibute nsogbu n'ọdịnihu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, nri alkaline enweghị ike iwere ya dị ka nri ọrụ ebube ebe ọ bụ na ịchọghị oke ibu ọnwụ n'oge kachasị dị mkpirikpi. E gosipụtabeghị na ọ nwere mmetụta nlọghachi na onye kpebiri ịgbaso ya. N'ọnọdụ ọ bụla, dịka ọ na-eme mgbe niile mgbe ị na-amalite otu ụdị nri, ọ ga-adị mma ka ị gakwuru onye ọkachamara ga-adụ gị ọdụ ma ọ bara uru ịgbaso ya ma ọ bụ na ọ bụghị.
Mgbe ahụ, m ga-ahapụrụ ụnụ vidiyo nkọwa ka o dokwuo gị anya Kedu ihe bụ nri alkaline.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nri » Alimentos » Nri alkaline
Kedu ka esi abawanye ferritin n'ụzọ nkịtị?
Kedu ihe kpatara na ọ gaghị ekwe omume oge ụfọdụ iwepụ abụba afọ na ịgba ọsọ?